मलाई स्वागत गर्न पत्र काटिएको थिएन, मन्त्रा`लय पुग्दा कुरा मिलिसकेको रहेछ : डा. पुन !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/मलाई स्वागत गर्न पत्र काटिएको थिएन, मन्त्रा`लय पुग्दा कुरा मिलिसकेको रहेछ : डा. पुन !!
मलाई स्वागत गर्न पत्र काटिएको थिएन, मन्त्रा`लय पुग्दा कुरा मिलिसकेको रहेछ : डा. पुन !!
काठमाडौँ । सरुवारोग विशे`षज्ञ तथा टेकु अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट सं`योजक डा. शेरबहादुर पुनले मिडिया र जनताको दबाबका कारण आफू`माथिको कारवाही रोकिएको बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको अन्तरवार्तामा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘ममाथि कारबाहीको तयारी भएको थियो भन्ने त मन्त्रा`लयका अधिकारीहरूले यसअघि मिडियामा दिएका प्रतिक्रियाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ नि । डाक्टर भएर किन जा`न्ने हुने ? चेतना फैलाउँछु भन्दै किन बोल्ने ? आवश्यक परे मन्त्रा`लयका प्रवक्ता बोल्छन् भनेर त मिडियामा उहाँहरूले बोल्नुभएकै हो नि । छापिएकै छ नि ।’
‘तर, यो महामारीका विषयमा विज्ञ डाक्टर नबोलेर को बोल्ने भ`न्ने मेरो अडान अहिले पनि छ । किनकि चेतना फैलायो भने संक्र`मण रोकिन्छ, त्यसैले चेतना फैलाउनु त हाम्रो धर्म हो भन्ने मेरो भनाइ छ,’ उनले थप भनेका छन, ‘महामा`रीका वेला निरन्तर बिरामी जाँचिरहेको डाक्टरलाई स्वागत गर्न त पत्र अवश्य काटिएको थिएन । तयारी त कारबाहीकै थियो ।’
तर, आइतबार मन्त्रा`लयमा पुग्दा स्थिति फेरिएको बताउँदै उनले भने, असाध्यै राम्रोसँग कुराकानी भयो । म मन्त्रा`लयमा पुग्दा धेरै कुरा मिलिसकेको रहेछ । यसलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिँडेका हुन् । तर, अहिले हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेपछि मैले हुँदैन भन्ने कुरै भएन । मिलेर कोभिड`विरुद्ध लडौँ, आपसमा नलडौँ त मैले नै भन्दै आएको छु । त्यसैले उहाँहरूको प्रस्तावलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ । तर, अब मिलेर अघि बढ्ने हो, कोरोना`विरुद्ध सं`गठित अभियानमा पहिलेजस्तै सक्रि`य हुने हो ।
काठमाडौंमा भूकम्पको झड्का, घरबाहिर निस्किए सर्वसाधारण
अब कुन-कुन भारतिय च्यानल नेपालमा चल्दैनन् ?
राहत वितरणको फोटो खिच्न नपाइने !!
रमेश प्रसाई र कल्पना दाहाल बीच बिबाह हुन्छ भन्दै कल्पनाकी आमा आइन मिडियामा,कल्पना लाजले भुतुक्कै